Toetran’i Jesosy Tokony Hotahafina | Fiainan’i Jesosy
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cinghalais Dangme Danoà Drehu Efik Esan Espaniola Estonianina Failandey Fante Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galoà Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Holandey Hongroà Hunsrik Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kamba Kambôdzianina Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabo) Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwanyama Letonianina Lingala Litoanianina Lomwe Luganda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Maya Mingrelian Mizo Mongol Mooré Myama Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Poméranien Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Rômania (Vlax any Rosia) Samoanina Sango Sena Sepedi Sepulana Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Udmurt Umbundu Uruund Valencienne Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Lavorary i Jesosy ka mbola tsy niainany ny zavatra maro mahakivy sy mampiady saina ny olombelona. Tena nangoraka ny olona anefa izy. Nikely aina nanampy azy ireo izy, ka nanao mihoatra noho izay nilain’izy ireo mihitsy. Nandrisika azy hanampy ny hafa ny fangorahany. Saintsaino ny ohatra navelany, ao amin’ny Toko 32, 37, 57, 99.
HO MORA HATONINA
Tsy niseho ho ambony i Jesosy na nihatakataka tamin’ny hafa. Tsy nisalasala nanatona azy àry ny olona maro, na tanora na antitra. Tsapan’izy ireo fa tena niahy azy i Jesosy, ka nahazo aina tsara izy ireo niaraka taminy. Diniho izany ao amin’ny Toko 25, 27, 95.
HO TIA MIVAVAKA
Nivavaka matetika tamin’ny Rainy i Jesosy ary nafana fo rehefa nivavaka. Nanao izany izy, na nitokana na rehefa niaraka tamin’ny mpanompon’i Jehovah hafa. Nivavaka imbetsaka izy fa tsy rehefa nisakafo ihany. Nivavaka izy mba hisaorana ny Rainy sy hiderana azy ary mba hangatahana ny tari-dalany rehefa handray fanapahan-kevitra lehibe. Diniho ny ohatra navelany, ao amin’ny Toko 24, 34, 91, 122, 123.
TSY HO TIA TENA
Mbola nikely aina nanampy ny hafa i Jesosy, na dia rehefa afaka niala sasatra sy niala voly aza. Tsy tia tena izy. Modely azontsika arahina akaiky koa izy amin’izany. Ianaro ny fomba nampisehoany an’izany, ao amin’ny Toko 19, 41, 52.
Namela ny heloky ny mpianany sy ny olon-kafa i Jesosy fa tsy nampianatra fotsiny hoe ilaina ny mamela heloka. Saintsaino ny ohatra navelany, ao amin’ny Toko 26, 40, 64, 85, 131.
HO BE ZOTOM-PO
Efa voalaza mialoha fa tsy hanaiky ny Mesia ny ankamaroan’ny Jiosy, ary hovonoin’ny fahavalony ho faty izy. Azon’i Jesosy natao àry ny nitsitsy tena rehefa nanampy ny hafa. Nazoto nampirisika ny olona hanaraka ny fivavahana marina anefa izy. Modely ho an’ireo rehetra manara-dia azy izy, rehefa sendra olona tsy miraika na manohitra izy ireo. Jereo ny Toko 16, 72, 103.
Ambony noho ny olombelona tsy lavorary i Jesosy, amin’ny lafiny maro. Mahalala zavatra sy hendry kokoa, ohatra, izy. Lavorary izy ka nahavita zavatra kokoa sy nahira-tsaina kokoa noho ny olon-kafa. Nanetry tena sy nanompo ny hafa anefa izy. Misy lesona momba izany ao amin’ny Toko 10, 62, 66, 94, 116.
Nanam-paharetana tamin’ny apostoly sy ny olon-kafa foana i Jesosy, rehefa tsy nahavita nanahaka azy izy ireo na tsy nanaraka ny teniny. Tsy sasatra izy namerimberina nampianatra azy ireo an’izay nilaina mba hifandraisana akaiky kokoa amin’i Jehovah. Saintsaino ny ohatra navelany, ao amin’ny Toko 74, 98, 118, 135.
Hizara Hizara Te Hanahaka An’i Jesosy ve Ianao? Miezaha Àry...